ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းပြောဆိုခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားပြုခြင်းခံရသောလူငယ်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုတားဆီးရန်စဉ်းစားကြသည် (2017) - Your Brain On Porn
ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအကြောင်းပြောနေတာငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့မယ်လို့: လိင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူ (2017) တားဆီးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်စော်ကားသူကိုလူငယ်များ
ကလေးသူငယ် Negl အလွဲသုံးစားပြုမှု။ 2017 သြဂုတ်; 70: 210-221 ။ Doi: 10.1016 / j.chiabu.2017.06.017 ။ EPub 2017 ဇူလိုင်3။
McKibbin, G1, Humphrey ကို C2, Hamilton က B ကို2.
ကလေးများနှင့်လူငယ်များကဆောင်ရွက်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူအားလုံးကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကျူးလွန်၏ထက်ဝက်ခန့်တွက်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလက်ရှိကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များတိုးမြှင့်လိင်ကြမ်းတမ်းဘူးသောလူငယ်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်ဆွဲဖို့ပဲ။ အဆိုပါလေ့လာမှု 14 လူငယ်များနှင့်ခြောက်လကုသမှု-ပေးလုပ်သားများနှင့်အတူ Semi-စနစ်တကျအင်တာဗျူးများပါဝင်ပတ်သက်။ နမူနာရည်ရွယ်ချက်ကြီးနှင့်လူငယ်များသည်ယခင်ကဗစ်တိုးရီးယားသြစတြေးလျအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ကုသမှုအစီအစဉ်ကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလူငယ်များအန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူတို့၏ယခင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သူတို့ရဲ့အတိတ်ကြမ်းတမ်းအပြုအမူသညျးခံခှငျ့လှသို့မဟုတ်လျော့ချမခံခဲ့ရပါဘူး။ တည်ဆောက် grounded သီအိုရီဟာအရည်အသွေး data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူတားဆီးဘို့အခွင့်အလမ်းများကိုလူငယ်များနှင့်လုပ်သားများနှင့်အတူအင်တာဗျူးများများ၏အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုတေသနမှကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်ပါဝင်သည့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသုံးအခွင့်အလမ်းများ, ဖော်ထုတ်: သူတို့ရဲ့လိင်ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်; သူတို့ရဲ့သားကောင်အတွေ့အကြုံများအမှားကိုပြင်ဆင်ရန်; နှင့်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအခွင့်အလမ်းများကိုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်တိုးမြှင့်ဖို့အစပျိုး၏ဒီဇိုင်းကိုအကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်။
KEYWORDS: child sexual abuse; ကလေးများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူနှင့်အတူလူငယ်များ၏; တည်ဆောက်သီအိုရီ grounded; ကာကွယ်တားဆီးရေး; ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမော်ဒယ်; လိင်ကကြမ်းတမ်းအပြုအမူ
Doi: 10.1016 / j.chiabu.2017.06.017
4.3 ။ ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုများလည်းပြတ်တောက်မှတဆင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး
ညစ်ညမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုကူညီပေးနေ ပတ်သက်. လူငယ်များနှင့်လုပ်သားများနှင့်အတူအင်တာဗျူးတွေကတဆင့်ဖော်ထုတ်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့တတိယအခွင့်အလမ်းသိသိသာသာကာကွယ်တားဆီးရေးအလားအလာရှိစေခြင်းငှါများနှင့်သိသိသာသာကွာဟချက်ပြဿနာကိုလှည့်ပတ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်သုံးခုစလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ရှိပါသည်။
အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းသည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များ၏အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများရှိသည် (Crabbe & Corlett, 2010; Flood, 2009; Wright et al ။ , 2016) ။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကလေးများနှင့်လူငယ်များသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမှတစ်ဆင့်အိမ်နှင့်ကျောင်းဝန်းကျင်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေးမှရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသုံးစွဲခြင်းသည်အချို့သူများအတွက်လိင်စော်ကားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အလုပ်သမားများ၏ထင်မြင်ချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားသောအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလူငယ်များ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျယ်ပြန့်သောလူမှုဗေဒဆိုင်ရာစာပေများနှင့်အညီလိုက်ဖက်ညီသည် (Albury, 2014; Crabbe & Corlett, 2010; Papadopoulos, 2010; Walker, Temple-Smith, Higgs, & Sanci, 2015) ။ ဤအထောက်အထားကအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းကပိုမိုလွယ်ကူလာပြီးခေတ်မှီလာသည်နှင့်အမျှအမျိုးသမီးများအားနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုပုံစံများသည်မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များနှင့်ပုံစံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုကလေးများနှင့်လူငယ်များအားကျား၊ မ၊ စွမ်းအား၊ အသက်နှင့်ခွင့်ပြုချက်သဘောတရားများကိုဝေဖန်စဉ်းစားခြင်းစွမ်းရည်များကိုသင်ကြားပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုအလုပ်သမားများ၏အကြံပြုချက်သည်ပေါ်ထွက်လာသောညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားများနှင့်လည်းကိုက်ညီနေသည် (Albury, 2014) ; Crabbe & Corlett, 2010) ။ သို့ရာတွင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်ကိုပြသရန်အထူးအားဖြင့်အားနည်းသောကလေးများနှင့်ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိကလေးငယ်များအတွက်သင့်လျော်သောညစ်ညမ်းစာပေတတ်မြောက်မှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ပုံ (၂) တွင်ပြထားသည့်အတိုင်းကာကွယ်တားဆီးရေးတတိယအခွင့်အရေးကိုအစိုးရနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကလေးသူငယ်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်အဓိကတားဆီးကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒါဟာကလေးများနှင့်လူငယ်များအဘို့အညစ်ညမ်းပြဿနာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မိသားစုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းများ၏ပျက်ဆီးဘို့အကောင့်မှစက်မှုလုပ်ငန်းကိုင်ပြီးအတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍယူပြီးအစိုးရအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်လည်းမရှိကြောင်းနိုငျရာ၏ဘောငျကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်ပေါ်လာသည်။ ထို့ပြင်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့တတိယအခွင့်အလမ်းထိုကဲ့သို့သောလိင်ရငျးနှီးနှင့်အတူစော်ကားသို့မဟုတ်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီသောသူကဲ့သို့အားနည်းချက်ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုတုံ့ပြန်ရန်အဖြစ်မူဝါဒများ, လေးစားမှုဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပညာရေး၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများမှညစ်ညမ်းစာတတ်မြောက်ရေး၏နိဒါန်းအကြောင်းကြားရန်အသုံးပြုနိုင် မိတ်ဖက်အကြမ်းဖက်မှုများ။ အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူမှကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းညစ်ညမ်းအပြုအမူထွက်လာပါတယ်ကစားသောအခန်းကဏ္ဍ၏အကောင့်ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။